Xafiisyada Shirkadda FACEBOOK Oo Laga Qaxay Kaddib Markii Laga Shakiyey In Sunta Sarin Ay Taallo | Salaan Media
Xafiisyada Shirkadda FACEBOOK Oo Laga Qaxay Kaddib Markii Laga Shakiyey In Sunta Sarin Ay Taallo
Shaybaadh joogto ah oo qaybaha boostada ee dalka Maraykanku samayso ayaa dhowaan soo saaray in maadadda sunta ah ee Sarin ay ku jirto mid ka mid ah, shandad boostu leedahay oo taallay xafiisyada shirkadda FACEBOOK.
Masuul ka tirsan waaxda dab-damiska Maraykanka oo la hadlay shabakadda Business Insider ayaa sheegay in weli ay wadaan baadhista arrintan, suurtagalna ay noqon karto in digniintu ay beenowdo. Laakiin si loo taxaddaro ayaa dadka oo dhan laga daadgureeyey afar ka mid ah xafiisyada shirkadda, waxaana la hawlgeliyey xafiiska dembi-baadhista ee FBI da. Dhinaca kalana waxa ay hay’adaha sirdoonku bilaabeen in ay dabagal gaar ah ku sameeyaan tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo uu geli karo tuhun ah in ay suntan haddii ay jirto, iyagu keeneen xarunta. Waxaanay warbaahinta qaar sheegayaan in tirada dadka dabagalka lagu sameeyey ay laba ruux oo keliya tahay. Illaa hadda ma jirto cid laga shakisan yahay in ay suntan khatarta badani wax yeellaysay.
Afhayeen u hadlay FACEBOOK ayaa sheegay in bilowgii hore afar xafiis shaqaalaha oo dhan laga daadgureeyey, laakiin saddex ka mid ah dib loogu soo noqday, halka xafiiska kalana weli baadhitaankiisu socdo.
Sunta Sarin waa sun disha neerfeyaasha, waxaana inta badan loo adeegsadaa samayska hubka kiimikada ah. suntani dhibaatooyinka ay keento waxaa ka mid ah in qofku uu miyir beelo, in muruyqadu isku soo ururaan oo qofku uu kogo, in dhinac qallal dhaco, in qofku neefsan kari waayo, iyo khataro kale oo dhimasho kedis ah keena.